IINGCAMANGO EZINGAMA-50 ZEDISK DECK DESIGN - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi Iingcamango ezingama-50 zeDisk Deck Design
Iingcamango ezingama-50 zeDisk Deck Design
Wamkelekile kwigalari yethu yemibono emihle yokuyilwa kweenkuni ngeendlela ezahlukeneyo zasekhaya. Ukongeza ipakethe kwikhaya lakho yindlela engabizi kakhulu yokwandisa indawo yayo yokuhlala kunye nokongeza ubuhle bayo kunye nexabiso. Ngaphambi kokuba uqale uyilo lwakho kubalulekile ukuba ujonge usetyenziso oluphambili oluza kusebenza, nokuba kukuzonwabisa, ukuphumla, okanye ukutya ngaphandle. Umgangatho kufuneka ubekwe ukuze uthathe olona luvo ufuna ukulubamba, okanye ukunqande. Ngapha koko, uya kufuna ukuqaphela ukuba loluphi uhlobo lomgangatho oza kufana nesitayile sasekhaya, indawo ekhoyo kunye nepatio okanye indawo yegadi.
Lo mfanekiso ungasentla unendawo enkulu yeepatio enendawo entle yokujonga ichibi elisebenzisa indawo yamaplanga e-Colonial Maple eneebhalusters ezimhlophe kunye neetreyini zeglasi ezimnyama. Ikwanayo nempahla yeplanga yeMaple kunye nesambrela esikhulu sokusonga.
Nazi ezinye zeentlobo ezahlukeneyo zeenkuni uyilo lomgangatho iyafumaneka:
Ii-Decks zeAngular- Kwabo bafuna ukunqanda iikona zesikwere zoyilo oluqhelekileyo. Ukutswina iikona zetheko lakho kunokukunika uyilo olunomdla kunye nokwandisa umtsalane ngaphandle kokuchitha imali eninzi.
Ngaphakathi Kwidesika yeeKona- Olu lukhetho olukrelekrele kumakhaya amise okwe-U okanye e-L avumela umntu ukuba andise indawo yabo ngelixa esongeza ubumfihlo kunye nokusondelelana kwiindonga zekhaya.
Isiqithi kunye nePeninsula Decks: Angaqhotyoshelwanga ngqo endlwini, le ndlela yokubeka umgangatho inokufakwa naphi na eyadini. Ihlala isetyenziselwa ukwenza indawo yokumema ngezantsi komthi owuthandayo okanye kwindawo yokubamba ezona mbono zibalaseleyo.
Amanqanaba emigangatho emininzi-Olu hlobo luhlala lusetyenziselwa izindlu ezinamanqanaba amanqanaba okanye kwabo banee-sloping okanye iiyadi ezime ngendlela engaqhelekanga. Ezi ndawo zinamacandelo amabini okanye nangaphezulu aqhagamshelwe ngezinyuko okanye iindlela zokuhamba.
Iiplatifomu zePlatform -Ihlala ihleli okanye kufutshane nenqanaba lomhlaba olu luyilo lusebenza kakuhle kumakhaya anebali elinye kwaye lidibana kakuhle nokulungiswa komhlaba.
Iidiski eziphakanyisiweyo- Inkulu yokongeza indawo yangaphandle kwigumbi lokulala eliphezulu, le ndlela inokukunceda wandise ukubonwa kwamakhaya akho. Ukongeza olu luyilo lusebenza kakuhle kwabo baneeyadi ezijingayo.
Iideksi zoxande- Le ndlela yakudala yenye yezona zinto zidumileyo kwaye zihlala zisetyenziselwa ukongeza ukuhonjiswa kwezinye okanye ngasemva kwendlu.
Imijikelezo kunye neeDeksi eziGobileyo- Ngokususa imiphetho enzima ngale ndlela unganikezela ipaki yakho ekubambeni imbonakalo eyahlukileyo.
Iidesika zesikwere-Imilo eyahlukeneyo eya kulungela izindlu ezininzi. Uyilo kulula ukwakha kwaye lukhetho olukhulu kwabo bakwabiwo-mali olunomda.
Iidiski eziSongelweyo-Olu hlobo likuvumela ukuba wandise indawo yokujonga ejikeleze ikhaya lakho kwaye lukhetho olukhulu xa ufuna ukonwabela izimvo zakho kwiindlela ezininzi.
Zininzi iinkqubo ezikuvumela ukuba wenze uyilo lwakho lwasemva kwendlu kunye nezicwangciso. Ndwendwela eli phepha uluhlu oludumileyo isoftware yoyilo ungasebenzisa ukuzisa izinto ezinje ngokulungiswa komhlaba, iiplatifti zomthi, iibhentshi kunye namachibi okudada ukwenza indawo yakho esemva kwendlu.
Iingcamango zeWood Deck
Nazi ezinye zeendawo ezintle zomthi ezinemibala eyahlukeneyo yoyilo lwasekhaya kunye nokuhombisa umhlaba.
Ipatio encinci ephefumlelweyo yelizwe esebenzisa umthi weplanga kwi-Chestnut yesiNgesi enebala elimhlophe elipeyintiweyo ngomthi kunye nomgaqo kaloliwe. Iziqwenga zefanitshala ziphathwa ngealuminium ene-beige egutyungelwe ngumgubo ngesambrela sokusonga somthunzi. Ndwendwela eli phepha kwigalari yethu ye Uyilo lwepatio ukufumana ezinye izimvo.
Indawo entle ye-gazebo, indawo yesikwere esisebenzisa ububanzi obuninzi beRed Mahogany decking. Uphahla lwe-gazebo luxhaswe ziintsika zomthi ezipeyintwe kwimarble marble kwaye uphahla lusebenzisa imibala enombala okhanyayo. Iingcamango zokuyila i-Wood kunye ne-gazebos yindlela efanelekileyo yokwandisa ukuzonwabisa kwakho ngasemva kwendlu yakho ngokubonelela ngomthunzi kunye nokukhuselwa kwimozulu embi. Ayipheleli nje ekwandiseni ixesha onokulichitha kumgangatho wakho abanokunyusa kakhulu ixabiso lokuthengiswa kwakhona kwekhaya lakho.
Ngaphandle kwesakhiwo ikakhulu sinombala otyheli omhlophe kunye nabamhlophe, kubandakanya neziqwenga zefanitshala. Ukusetyenziswa kweeplanga ze-Ebony kwindawo esecaleni leephuli kunceda ukuyenza indawo ime ngaphandle kolunye ulwakhiwo.
Ipatio egqunyiweyo esebenzisa umthi obomvu weplanga, uzaliswa ziindonga zangaphandle eziboshwe ngezitena ezibomvu zeterracta kunye neengcango ezimhlophe zaseFrance kunye nokubumba. Ukuxhaswa kwephahla elityhilekileyo kukwimhlophe kwaye kufakwe izinto zepolycarbonate.
Lo mbono mhle wamachibi awuphazanyiswanga kule pilisi kucace gilili ngeesinyithi ezifakwe umgubo omnyama wesinyithi. Imigangatho isebenzisa i-Pickled Oak deck wood ngelixa ifanitshala isebenzisa izinto zokwenza iirattan. Umbono omkhulu yindawo efanelekileyo yokuyila iiplani zomthi ezijolise ekwandiseni indawo yakho yokuhlala kunye nokuxabisa iindawo.
Le ndawo inemigangatho emininzi yebhalkoni idibanisa izinto zakudala nezangoku. Umgangatho usebenzisa izinto ze-PVC zomgangatho weplanga kumbala we-matte Ebony, ngelixa ifanitshala esetyenzisiweyo inoyilo oludala kunye neepateni zokujikeleza, kusetyenziswa isinyithi esigutyungelwe ngumgubo kumbala omnyama we-mocha.
Eli khaya lale mihla lincinci lithelekisa umphezulu walo ocacileyo kunye ocacileyo ogqityiweyo kunye nokusetyenziswa kwempahla enezinto ezenziwe ngomthi ezazisanti ukuze kufezekiswe umthi wokugqobhoza kunye nokugqiba / ukubonakala kwamatte. Eminye imiphezulu yeekonkrithi okanye iithayile zamatye ezingwevu.
Umgangatho wesiqithi se-octagonal unendawo yokuhlala yangaphandle esebenzisa i-PVC imigangatho yeenkuni kumbala wesibhamu, kwaye umda uphathwe ngokhuni oluqinileyo. Iziqwenga zefanitshala zenziwe nge-Oak ye-driftwood, ukugcina ukurhabaxa, isanti.
Le patio intle isebenzisa umgangatho omhle womthi we-Oak, kwaye isebenzisa amasebe emithi yendalo njengoololiwe ngaphezulu komthi opolishiwe ukunika ugcino lwendalo / ikhabhathi. Iziqwenga zefanitshala yifenitshala yeklasikhi kunye nokhuni oluqinileyo oluqinileyo lwe-mahogany.
Indawo elula yeqonga kunye neparati enomgangatho obomvu oqinileyo womthi womthi womthi, odityaniswe nefenitshala yomthi oqinileyo eRed Mahogany. Zonke iziqwenga zefanitshala ezikule ngingqi zinamabala afanayo kwitoni yeMahogany.
ikhowudi yokunxiba xa uzilungiselela isidlo sangokuhlwa
Le ndawo yeephuli ijikeleze nge-Oak Solid Weak ene-grooves ethe tyaba. Iziqwenga zefanitshala kwisithuba zisebenzisa iirattan eyenziweyo ngombala omnyama we-mocha, kunye nonyango lwealuminiyam ephathwe kumbala ofanayo we-mocha.
Umgangatho oqinileyo weCherry Wood ukugcwalisa imigca ethe tyaba yomthi oqinileyo. Indawo ikwasebenzisa i-rattan yokwenziwa ngombala wendalo kunye nendawo yomlilo egqunywe ziithayile zesileyiti ezimnyama. Uxande lwale mihla Uyilo lomngxunya womlilo ihonjiswe ngesileyiti esingwevu kwaye ibonisa umhlwa onganyangekiyo ngomgubo wentsimbi isakhelo sentsimbi.
Izinyuko ezintle ezenziwe ngomthi zisebenzisa iinkuni zendalo zePoplar kulolonke ulwakhiwo-amanyathelo, iibalusters kunye neentsimbi zokubamba, kunye nokuhonjiswa kweenkuni ngenxa yokuhla kwezinyuko. Ukuphathwa kwePoplar emthubi kudla ngokusetyenziswa njengenye indlela yexabiso eliphantsi yokuhombisa ngaphandle. Izitopu zePoplar ezimthubi kunye nezithuba zihlala ngokuthe tye kwaye zinokubamba kakuhle kwizinto.
Lo mmandla webhalkhoni ubukhulu becala usebenzisa iithayile ezimnyama zeceramic ezidityaniswe neCherry Wood decking kunye neRed Chestnut eqinileyo. Iziqwenga zefanitshala zisebenzisa iirattan zendalo kunye nezambatho ezinganyangekiyo ngamanzi.
Indawo yokujonga indawo yetropiki isebenzisa iiplanga zomthi kwindawo efanayo yokulinganisa kunye naphantsi. Ngelixa isilingi sisebenzisa iiplanga zeCherry Wood eziqinileyo, imigangatho igutyungelwe yiplanga lomthi eliqinileyo elimnyama.
Indawo yokutyela ngaphandle yamachibi kunye nomgangatho weplanga oqinileyo weSolid mahogany kunye nokutya okumiselweyo kweTeak kunye nesitayile esomeleleyo sokhuni saseMahogany ngeglasi ecace gca ngombono ongacacanga wedike.
Indawo entle yaselunxwemeni lwaselunxwemeni engaphantsi kolwandle esebenzisa i-Ash eneenkuni zomgangatho weplanga ukujikeleza indawo yedama. Ngaphandle komgangatho weenkuni, ichibi likwakhiwe ngelitye elimhlophe lenyengane ukuyigqamisa kwabanye ukuba iindawo.
Eli khaya ngaselunxwemeni linedokodo lisebenzisa indlela esebenzayo, lisebenzisa iithayile zomgangatho wePVC kumbala wokhuni / ukugqiba ukuthanda umthi oqinileyo wobude obude. Ulungelelwaniso oluthe tyaba lweetayile zomgangatho uhambelana neepaneli eziluhlaza-zipeyintwe ngaphandle kwendlu.
Indawo epatio ephakanyisiweyo ejikelezwe yimithi kunye nohlaza osebenzisa indawo yomthi eqinileyo, edityaniswe ngomthi oqinileyo Oak railings & balusters. Ikwanayo nebhentshi eyenziwe nge-Oak eqinileyo kunye nendawo encinci egqunyiweyo.
Le ndawo yepatio inemigangatho eqinileyo yomgangatho wokhuni kumthi weTeak. Ngaphandle kwezindlu zineenkuni ezenziwe ngeplanga ngombala oluhlaza, i-trellis efanayo kunye nokubumba okumhlophe. Ifenitshala yensimbi eyenziwe nge-Rustic enee-cushion ezigqunyiweyo ezigqunyiweyo zongeza kwi-aesthetics yesiko kule ndawo yangaphandle.
Ikhaya lala maxesha elidibanisa izinto zangoku kwaye ugqibezele ngemigangatho yodidi yomgangatho weplanga. Ingaphandle lendlu lipeyintwe nje ngombala wekhrimu kwaye lidityaniswe nezinto zomthi ngombala okhanyayo ongwevu.
Indawo yale patio inombono obanzi novulekileyo wentsimi yengca kunye nechibi, ngelixa usebenzisa i-Ash enemibala ye-PVC yemathiriyeli yomgangatho wayo ukuyinika isibheno se-rustic. Iindonga zangaphandle zesakhiwo ziboshwe ngezitena ezipeyintiweyo ngombala oluhlaza we-emerald.
Ibhalkhoni ebekwe kwindawo yeethropiki esebenzisa imigangatho eqinileyo yokuhombisa iinkuni kunye nezitulo zetheyibhile kunye neetafile. Inemizila yeglasi ecacileyo yokujonga ngokufanelekileyo kunye neentsimbi zomthi eziqinileyo zokuxhasa imigangatho.
Le lanai yangaphandle idibanisa iithayile zamatye ezimhlophe ze-porcelain phantsi kunye neetayile zomthi wom-oki eziqinileyo zokugubungela imigangatho yayo. Iziqwenga zefanitshala zisebenzisa izinto zokwenziwa zerattan ezinelaphu elimnyama nelimhlophe elinemigca.
I-balcony evulekileyo evulekileyo enendlela elula necacileyo yoyilo. Imigangatho isebenzisa ukukhanya okukhanyayo kweCherry Wood kunye nokuqina okunyangayo kwemozulu okuphathwayo iTeakwood kunye neebalusters. Ifanitshala esetyenzisiweyo iphathwa nge-aluminium emnyama.
Eli khaya lanamhlanje line lanai yangaphandle enendawo yokuphumla esebenzisa iplanga elomeleleyo leenkuni kwindawo emnyama. Le nto ikwasetyenziswa kwiveranda epokothweni. Imizila kunye neebalusters zenziwe ngentsimbi emnyama emnyama, kwaye iziqwenga zefanitshala zibunjwe ngeplastikhi ngokunyanga ialuminium.
Indawo entle yokutyela / ye-barbeque enomgangatho oqinileyo womthi kwimephu ye-Colonial. Ineseti efanayo yeebalusters, kunye nodonga olunezitena zeterracotta. Iziqwenga zefanitshala zonke ziphathwa ngealuminium enetafile yeglasi ephezulu.
Eli khaya lanamhlanje elincinci linepatiyo enkulu evulekileyo enendawo yokuphumla. Isebenzisa iithayile zomthi eziqinileyo ezinganyangekiyo kwimozulu kwi-Mahogany ebomvu. Iindonga zangaphandle zendlu zinezitena zetreyini, kwaye ucingo aluphelelanga ekugqityweni kwekhonkrithi eluhlaza.
Ipatio enkulu yanamhlanje enee-tile zeBirch Wood eziqinileyo. Imizila kaloliwe imivalo yesinyithi elula emnyama. Kukho indawo ehleliyo esebenzisa i-rattan eyenziweyo kunye nendawo yokutyela eneambrela / umthunzi welanga.
Ibhalkhoni entle ejikelezwe yimithi kunye nohlaza. Imigangatho yedesika yenziwe ngepayini eqinileyo ejijekileyo, ngelixa iziporo zomthi oqinileyo zipeyintwe ezimhlophe, ngombala omhlophe wentsimbi endaweni yeebalusters.
bangaphi abantu bokulungiselela onokuba nabo
Le balcony yanamhlanje ibonisa umbono wemifuno kunye nechibi. Igqume imigangatho yeenkuni ngomthi oqinileyo omdaka / i-baluster. Iindonga zinxitywe ngemithi ethe nkqo eyenziwe ngepeyinti ye-mocha brown.
Indawo enkulu yokutyela ngaphandle embindini wepaki / yegadi esebenzisa imigangatho yeplathi emhlophe eqinileyo kunye neebalusters zomthi ezipeyintwe ngombala omdaka. Indawo yokutyela ineseti elula yezitulo ezimhlophe kunye netafile yeglasi engaphezulu emdaka.
Eli khaya lanamhlanje linendawo yelanai enesisa engaphaya kwendawo. Isebenzisa umthi we-teak oqinileyo onganyangekiyo kwimozulu ngeseti yokutya eyenziwe ngomthi. Ngelixa uninzi lwangaphandle lwendlu lumhlophe, iingcango, iifestile kunye nezinye izinto zokwakha zikwindawo yokugqibela ye-teak. Imithi yesundu kunye nokugqitywa kweenkuni kuyaqhubeka nomxholo wetropiki. Kukho indawo ephezulu yokuphuma kwigumbi lokulala ukuze wonwabe ngakumbi kwiimbono.
Indawo yangaphandle yelanai ene-Mahogany ebomvu yomthi oqinileyo. I-trellis ikwa-Mahogany, ngelixa ingaphandle ukuba ulwakhiwo lunee-sidings zomthi ezithe tyaba ezipeyintwe ngwevu okhanyayo. Iziqwenga zefanitshala zenziwe ngealuminiyam emnyama ephathwe ngento ebomvu ebomvu.
Eli cala leephuli linendawo encinci yentente yomthunzi kunye nendawo yokutyela ye-barbecue, i-lounging okanye ezinye iinjongo ezifanayo. Iinkuni ezisetyenziselwa ipakethe ngum-oki okhethiweyo ukunika isibheno se-rustic. Indawo yomlilo inamatye omlambo aqinileyo adityaniswe kunye.
Le balcony inesibheno esiqhelekileyo, esihle. Inika umbono olungileyo wegadi / ipaki, kwaye ibonelela ngendawo yokuhlala kunye yokutya kunye nesambrela somthunzi. Imigangatho isamente enemibala e-orenji, ngelixa i-cream balusters ekhanyayo yenziwe ngaphandle kwelitye eliqinileyo.
Ikhabhathi enesisa sendawo yelanai ejikelezwe luhlaza. Isebenzisa imixokelelwane yomthi wepayini yomthi oqinileyo ophathwe yimozulu. Imizila isebenzisa iphayini, kodwa isebenzisa iintambo zocingo ukubuyisela iibalusters eziqhelekileyo.
yimalini ekufuneka ichithwe yindoda kwindandatho yokuzibandakanya
Lo mmandla webhalkhoni ubonelela ngendawo yokutyela / ibha, kunye neJacuzzi yokuphumla kuyo. Imigangatho esetyenziselwe esi sithuba ngumgangatho wePVC okumgangatho wombala we-driftwood. Ijacuzzi kunye neziporo zisebenzisa umthi oqinileyo wePecan.
I-lanai ebonelela ngendawo yokuhlala ehleli kamnandi kunye nendawo yokutyela, kunye nobumfihlo obukhulu kunye nomthunzi. Imigangatho zii-PVC ezineetayile zekhonkco kumbala omnyama wengue wokutshatisa i-trellis kunye nophahla lwe-polycarbonate engwevu emnyama.
Oku uyilo lokuqubha Sebenzisa iintlobo ezimbini zomgangatho. Indawo ephezulu iphakamisa iithayile ze-porcelain ezinombala, ngelixa indawo esecaleni kwephuli isebenzisa i-Mahogany yomthi oqinileyo.
Indawo yale patio ibonelela ngombono omnandi wechibi kunye nendawo yokuhlala ukuze udle kwaye uphumle. Imigangatho yomgangatho weenkuni yayihlanjwe ngombala ongwevu okhanyayo ukufezekisa ukugqitywa kwe-antique. Imizila yeenkuni eziqinileyo ikumbala okhanyayo okhanyayo ngelixa iingcango, iifestile kunye nezinye izinto zimhlophe.
Le balcony yanamhlanje inombono omangalisayo kunye nendawo enkulu yokutya kunye nokuphumla. Imigangatho yomgangatho weenkuni ikumthi we-Beech wendalo ngelixa iziporo zikwisitayile esimnyama sesikwere setyhubhu kunye neglasi ecacileyo yomsindo.
Indlela entle yegadi ephakamileyo ehonjiswe ngomthi we-PVC Teak. Iingqameko zamasango zenziwe ngomthi oqinileyo we-teak, kwaye ujikeleze indlela yokuhamba a phawu lwamanzi egadi echibini elinamatye omlambo kunye nezityalo ezahlukeneyo.
Igumbi lokulala lanamhlanje elinebhalkhoni enkulu ejonge echibini. Isebenzisa iithayile zomthi we-Beech ezilungiswe ngokuthe tye, ngelixa igumbi ngokwalo lisebenzisa ii-laminates zomthi we-beech. Izitimela zemivalo yentsimbi emnyama kunye neengcingo zentsimbi endaweni yeebalusters.
Le ndawo ye-barbecue yegadi iyazahlula kubo bonke ubume bomhlaba kunye neempawu zamanzi kumgangatho ophakamileyo womthi kumnatha odibeneyo. Ifanitshala yokuhlala yenziwe nge-rattan ephothiweyo, ngelixa itafile yokutyela i-Teak eqinileyo.
Lo mmandla wegadi lanai unendawo ephezulu ngokusebenzisa iithayile zomgangatho wokhuni. Iziqwenga zefanitshala zenziwe nge-rattan engwevu eyenziwe ngombala kunye nejayi yombhoxo ehambelana nayo.
Uninzi lweengcinga zoyilo lomgangatho weplanga ziqala ngamakhaya angaphandle kwaye ziyile uyilo olusongelweyo ukwenza indawo efanelekileyo yokonwabela imimandla engaphandle yekhaya. Ngasentla kukho ipaki enkulu esecaleni kwegadi eneeplanga zomthi oqinileyo. Igcinwe kwisiphelo sayo sendalo esingafakwanga i-varnished ukufezekisa ukujonga okungaphezulu kwe-rustic. I-balusters kunye ne-Railings, kwelinye icala, isebenzisa i-oki yendalo eqinileyo.
Ikhabhathi entle eyenziwe ngomthi kunye nendawo enesarbeji ephezulu esebenzisa imigangatho eqinileyo yomthi. Ngurustic izitimela zomgangatho Sebenzisa iziqwenga ezinkulu zemithi engatyibilikiyo ukutshatisa iindonga ezinkulu zomthi wekhabhathi.
Oku uyilo lomgangatho wanamhlanje ine-balcony enkulu kunye nendawo yokuphumla enomthunzi. Ukuhonjiswa kusetyenziswa iiplanga zomthi we-drift kunye neziporo zentsimbi ebunjiweyo ngombala ompunga. Isingqengqelo esingaphandle siyabuyela kwisahlulo esimnyama severanda egutyungelweyo.
ishawari somgangatho wengqalutye
iindlela ezintle zokubuza iintombi zitshatileyo ukuba zibekhona emtshatweni wakho
Ijim yomtshato neofisi yomtshato
Isipho seminyaka eli-15 somtshato wakhe
ngowuphi umnwe womsesane womtshato